दाइजोमा औँ-ठी र सिक्री सानो भएको भन्दै विहे गरेको पहिलो महिनामै २३ वर्षिया बिष्णु बराल को ह’त्या न्याय को लागी सेयर गरी सबैमाझ पुराइदिनुहोल - Onlinenews Global
दाइजोमा औँ-ठी र सिक्री सानो भएको भन्दै विहे गरेको पहिलो महिनामै २३ वर्षिया बिष्णु बराल को ह’त्या न्याय को लागी सेयर गरी सबैमाझ पुराइदिनुहोल
June 27, 2021 laxmiLeaveaComment on दाइजोमा औँ-ठी र सिक्री सानो भएको भन्दै विहे गरेको पहिलो महिनामै २३ वर्षिया बिष्णु बराल को ह’त्या न्याय को लागी सेयर गरी सबैमाझ पुराइदिनुहोल
पोखरा महानगरपालिका–२२, पुन्धीगुन्धी दोबाटो निवासी २३ वर्षिया बिष्णु बराल (क्षेत्री) को विवाह भएको २७ दिनमै मृ त्यु भएको घटनाले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ । आमाको आँखा ओ’भाएका छैनन् ।
वैशाखको १७ गते उनको विवाह भएको थियो । जेठको १४ गते उनको रहस्यम मृ त्यु भयो । विवाहमा १५ लाख रुपैया खर्च भएको थियो । विष्णु की आमाले दाईजो कम भएको भन्दै ह’त्या गरिएको आ’रोप लगाएकी छिन् ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–२२, पुन्धीगुन्धी दोबाटो निवासी २३ वर्षिया बिष्णु बराल (क्षेत्री) को विवाह भएको २७ दिनमै मृ त्यु भएको घटनाले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ । आमाको आँखा ओ’भाएका छैनन् । वैशाखको १७ गते उनको विवाह भएको थियो । जेठको १४ गते उनको रहस्यम मृ त्यु भयो । विवाहमा १५ लाख रुपैया खर्च भएको थियो ।
विष्णु की आमाले दाईजो कम भएको भन्दै ह’त्या गरिएको आ’रोप लगाएकी छिन् । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–२२, पुन्धीगुन्धी दोबाटो निवासी २३ वर्षिया बिष्णु बराल (क्षेत्री) को विवाह भएको २७ दिनमै मृ त्यु भएको घटनाले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ । आमाको आँखा ओ’भाएका छैनन् ।
वैशाखको १७ गते उनको विवाह भएको थियो । जेठको १४ गते उनको रहस्यम मृ त्यु भयो । विवाहमा १५ लाख रुपैया खर्च भएको थियो । विष्णु की आमाले दाईजो कम भएको भन्दै ह’त्या गरिएको आ’रोप लगाएकी छिन् ।कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–२२, पुन्धीगुन्धी दोबाटो निवासी २३ वर्षिया बिष्णु बराल (क्षेत्री) को विवाह भएको २७ दिनमै मृ त्यु भएको घटनाले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ ।
आमाको आँखा ओ’भाएका छैनन् । वैशाखको १७ गते उनको विवाह भएको थियो । जेठको १४ गते उनको रहस्यम मृ त्यु भयो । विवाहमा १५ लाख रुपैया खर्च भएको थियो ।
विष्णु की आमाले दाईजो कम भएको भन्दै ह’त्या गरिएको आ’रोप लगाएकी छिन् । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–२२, पुन्धीगुन्धी दोबाटो निवासी २३ वर्षिया बिष्णु बराल (क्षेत्री) को विवाह भएको २७ दिनमै मृ त्यु भएको घटनाले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ ।
आमाको आँखा ओ’भाएका छैनन् । वैशाखको १७ गते उनको विवाह भएको थियो । जेठको १४ गते उनको रहस्यम मृ त्यु भयो । विवाहमा १५ लाख रुपैया खर्च भएको थियो । विष्णु की आमाले दाईजो कम भएको भन्दै ह’त्या गरिएको आ’रोप लगाएकी छिन् ।
कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–२२, पुन्धीगुन्धी दोबाटो निवासी २३ वर्षिया बिष्णु बराल (क्षेत्री) को विवाह भएको २७ दिनमै मृ त्यु भएको घटनाले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ । आमाको आँखा ओ’भाएका छैनन् ।
वैशाखको १७ गते उनको विवाह भएको थियो । जेठको १४ गते उनको रहस्यम मृ त्यु भयो । विवाहमा १५ लाख रुपैया खर्च भएको थियो । विष्णु की आमाले दाईजो कम भएको भन्दै ह’त्या गरिएको आ’रोप लगाएकी छिन् ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
प्रचण्ड-माधवको नयाँ पार्टी घोषणा , अध्यक्ष को ?
करोडपति १० दिनमै कसरी रोडपति ?
उत्कृष्ट कृषकलाई सुनको हलो प्रदान गरिने
बहालवाला सरकारी कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकले माधव नेपालको पार्टी सदस्यता नपाउने